आश्विन २९, २०७७ २१:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । अहिले विश्वभर नै कोरोना संक्रमण महामारीका कारण ठूलो समस्या सिर्जना भइरहेको छ । नेपालमा पनि यो समस्याले हरेक क्षेत्रहरु अस्तव्यस्त भइरहेका छन् । मानिसहरुका दैनिक, जीवनयापनका तरिकाहरु बदलिएका छन् ।
अधिकांशलाई कोरोना महामारी अभिशाप भए पनि केहीलाई भने यो ठूलै अवसर पनि बनिरहेको छ । तपाई हामीमध्ये धेरैको कसै न कसैसँग पैसा लिनुपर्ने हुनसक्छ । कोरोना महामारीका कारण तिर्नुपर्ने व्यक्ति समस्यामा परेको देखेर माग्न पनि सकिरहेका छैनौँ होला ।
साँच्चै समस्या पर्नेहरुका पीडा, व्यथाहरु असरल्ल छन् । तिर्नुपर्ने पैसा तत्काल नर्तिन लागि सजिलो बहाना देखापरेको छ । ‘म कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ परेको छु’
कीर्तिपुर बस्ने रामनाथ शर्माले कीर्तिपुरमै व्यवसाय गर्ने एक व्यक्तिलाई करिब १ वर्ष अगाडि केही रकम सापटी दिएका थिए । साह्रै समस्या पर्‍यो भनेपछि रामनाथले अरुसँग सापट मागेर केही लाख रकम ती व्यवसायीलाई दिए । दुई महिनाका लागि भनेर दिएको सापटी उतनले सहर्ज फिर्ता गर्ने छाँटकाँट देखाएनन् । पटक–पटक भाका सार्दै, बहानाबाजी गर्दै आएका थिए ।
ती व्यक्तिले दिएको भाका अनुसार एकसाता अघि रामनाथले फोन गरी पैसा लिन कहाँ आउँ ? भनेर सोधे । यस पटक ती व्यक्तिले पैसा नतिर्न नयाँ बहाना निकाले । उने भने– ‘हेर्नु न, म त कोरोना लागेको व्यक्तिसँग सम्पर्कमा रहेकाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेँ, क्वारेन्टाइनमा छु । अब ७ दिनपछि काेराेना जाँच्नु भनेका छन्, त्यसपछि मात्रै कहिले भेट्ने भनेर म खबर गर्छु ।’ रामनाथलाई ती व्यक्तिको कुरा नपत्याइ सुखै भएन। तर भोलिपल्टै बुझ्दा ती व्यक्ति आफ्नो पसलमा मज्जाले व्यापार गरिरहेका थिए । कोरोना महामारीका कारण उनको व्यवसाय समस्यामा परेको पनि छैन । ती व्यक्ति खाद्यवस्तुको व्यापार गर्छन् । यी व्यक्तिले पहिले पनि आफू कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकोे बताउँदै आएका थिए ।
कलंकी बस्दै आएका एक व्यक्ति घर निर्माणको ठेक्का गर्छन् । निर्माणका क्रममा उनले विभिन्न हार्डवेयर पसलबाट ल्याएका सामानको निकै पैसा तिर्न बाँकी छ । जसले पैसा मागे पनि उनी उस्तै खालको जवाफ दिन्छन् ‘म कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेको छु, कतै निस्कन मिल्दैन ।'
उनका निर्माणका कामहरु भने भइरहेका छन् । उनले विभिन्न ठाउँमा तिर्नुपर्ने रकम जम्मा गरेर घडेरीमा लगानी गरेका छन् ।
गत महिना एक सञ्चारगृहबाट जागिर छाडेका एक पत्रकार गतसाता आफ्नो हिसाब माग्न उक्त सञ्चारगृहको प्रशासनमा पुगे । त्यहाँका कर्मचारीले उनलाई पाउनु पर्ने हिसाब देखाए । ती पत्रकारले मैले मेरो हिसाब कहिले पाउँछु ? भनेर प्रश्न गरे । ‘पैसा त अकाउन्टले दिने हो, उतै सोध्नुपर्छ’ भन्ने जवाफ आयो ।
ती पत्रकारले ल ठिकै छ । त्यसो भए म अहिले नै अकाउन्टमा जान्छु भनेर निस्किन खोजे । प्रशासनका कर्मचारीले रोक्दै भने–‘हैन नजानुहोस् अकाउन्टेन त अहिले क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ ।’ काठमाडौंमा कोरोना संक्रमण निकै बढिरहेका बेला नपत्याउने कुरा पनि भएन । ती पत्रकार पछि नै कुरा गरौँला भनेर निस्किए ।
पछि बुझ्दा अकाउन्टेन के को क्वारेन्टाइनमा हुन्थे ? अफिसका विभागीय प्रमुख र व्यवस्थापकहरुसँगका मिटिङमा समेत नियमित उपस्थित भइरहेका रहेछन् ।
काठमाडौंमै रहेको एक सञ्चारगृहको मार्केटिङमा काम गर्ने कर्मचारी आजकाल विज्ञापनको बक्यौता रकम उठाउन दिनभर विज्ञापन एजेन्सीहरु धाउनमै व्यस्त छन् । तर कतैबाट सुको हात लाग्न सकेको छैनन् । विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण हुनेबित्तिकै हतार–हतार बिल मागिहाल्ने विज्ञापन एजेन्सीहरु सञ्चारगृहलाई भुक्तानी गर्ने बेलामा भने उही बहाना अगाडि तेर्‍याउँछन्, कोरोना । विज्ञापन एजेन्सी जाँदा बिल लिने र विज्ञापनदातासँग पैसा उठाउने कर्मचारीहरु अफिसमै हुन्छन् । तर पैसा तिर्ने अकाउन्टेनहरु चाहिँ फेला पर्दैनन् । अधिकांशमा उस्तै जवाफ आउँछ, ‘अकाउन्टेन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पर्नुभएको छ क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ ।’
कोरोना महामारीले थुप्रै क्षेत्रहरु अस्तव्यस्त भएका छन् । धेरैका व्यापार, व्यवसायहरु सुकेका छन् । साँच्चै धेरैलाई आर्थिक संकट पनि परेको छ । नियमति काम भइरहेका र साविककै आयआर्जन भइरहेकालाई पनि अहिले अरुको तिर्नुपर्ने रकम नतिर्नका लागि कोरोना ठूलै बहाना बनेको छ । कोरोना लागेका व्यक्तिको नजिक जान नहुने र कोरोना सर्ने डर भएपछि हतपत कोही भेट्न आउने कुरै भएन ।
कोरोना संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेको र क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनमा बसेको भनेपछि कसैले किचकिच पनि गर्ने भएन । अरुको पैसा तिर्न आनाकानी गर्नेहरुलाई कोरोना निकै सजिलो बाहना बनिरहेको छ । यही बाहनामा धैरैको अलिअलि रकम नतिर्दा पनि ठूलै रकम जम्मा हुन्छ । त्यही रकमले अन्त खेलो फड्को गरी थप आयआर्जन गर्न सफल भइरहेका बाठा छन् मान्छेहरु ।